China Dx51d Galvalume Aluzinc Coated Steel Strip fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Galvalume simbi tambo ine inoyevedza silvery chena pamusoro, inoumbwa nealuminium-zinc alloy structure, iyo inoumbwa ne55% aluminium, 43.4% zinc uye 1.6% silicon yakasimbiswa pa600 ℃.Iyo yakakosha alloy zvinhu izvo zvinowanzoshandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.Galvalume simbi tambo ine yakanakisa adhesion nependi, uye inogona kupendwa pasina pretreatment uye mamiriro ekunze kurapwa.
Galvalume simbi tambo ine akawanda akanakisa maitiro: yakasimba corrosion resistance, inova yakapetwa katatu kune yakachena galvanized strip;Kune maruva akanaka e-zinc pamusoro, anogona kushandiswa sekunze kwezvivakwa.
2.Grade: DX51d, nezvimwewo zvose maererano nechikumbiro chemutengi
5.Width: maererano nezvinodiwa nevatengi
8.Spangle: nguva dzose spangle, spangle duku, huru spangle
9. Kurapa kwepamusoro: Kurapa kwemakemikari, mafuta, yakaoma, Kemikari kurapwa nemafuta, anti-finger print.
10.Packing: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
*Galvalume Steel strip inoumbwa ne55% aluminium, 43.5% zinc uye 1.5% Silicon.
*Galvalume simbi tambo inogadzirwa, inokwenenzverwa uye inopendwa.
*Galvalume simbi tambo ine yepamusoro corrosion kuramba mumamiriro emuchadenga.Izvi zvinowanikwa kuburikidza nekubatanidzwa kwechibairo chekuchengetedza zinc uye chivharo chekudzivirira kwealuminium.
*Galvalume simbi tambo yekunamira kunze-inoita galvanized coating kubva ka2-6 pane inopisa dip galvanized steel strip.